ARDAYDA: Martin Vrijland
Warqad furan oo ku socota Peter R. de Vries ee kiiska Nicky Verstappen
Filed in BADBAADADA HALKAN	by Martin Vrijland	on 13 December 2018	• 13 Comments
Gacaliye Peter R. de Vries, oo aad u xiiso badan ayaan soo raacay maxkamadaynta saxaafada Nicky Verstappen, oo uu Jos Svech dhab ahaantii ciqaabay. Fikrad ahaan: Anigu ma ihi daafaca Jos Brech ama mid ka mid ah cunsuriyada galmada ama dilka caruurta. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa si xoog leh in kiiskani yahay mid maskaxeed [...]
Jos Brech: "dacwada Psyop" kaliya xagaaga 2019
Filed in BADBAADADA HALKAN	by Martin Vrijland	on 12 December 2018	• 10 Comments
Laga soo bilaabo qoraallada noolaha ee wargeyska Telegraaf Saskia Belleman, waxay u muuqataa in kiiskan maskaxeed ee Nicky Verstappen (niyad-jabka) uu yahay wax ka badan mawduuc. Qaar ka mid ah tweets ayaa raacaya taas oo muujin lahayd in Jos Brech qirtay in uu lahaa pornography ilmaha ee PC, laakiin waxay sheeganayaan in lagu qabtay fayruusyada. Jos [...]
Booliska 33 ayaa si lama filaan ah u helay faylasha Jos Brech oo sanadki hore ka dib!
Filed in BADBAADADA HALKAN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 9 November 2018	• 0 Comments
Waxay ahayd sahal degdeg ah, dabcan, waxayna ahayd shaqo aan macquul ahayn, laakiin si lama filaan ah waxaa jiray faylka hore ee Jos Brech, kaas oo uu ku xadgudbo galmo wiilasha aan qaangaarin. Kiiskan ayaa si deg deg ah hoos u dhacay, laakiin taasi maaha arrin. Peter R. de Vries wuxuu la socday dhamaan xiriirada [...]
Waxyaabaha ka muuqda xogta DNA-da ee qaran oo lagu daray xalinta kiisaska dilalka
Filed in BADBAADADA HALKAN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 26 September 2018	• 11 Comments
Dabcan, dhammaan Nederland way ka xuntahay in kiiska Nicky Verstappen uu keeney garsoore Jos Brech. Markii hore, DNA waxay keentay qabashada Jasper Steringa ee kiiska Marianne Vaatstra, sidaas darteed DNA waa natiijada. Xaalad walbana waxa ay keentay nidaam cusub oo sharci ah oo ay soo saartay gabadha saxafiyiinta ee Peter R. de [...]
Cadeyn in Gerald Roethof uu u muuqdo inuu yahay qareen PsyOp ee kiiska Jos Brech
Filed in BADBAADADA HALKAN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 25 September 2018	• 8 Comments
Inta badan kiisaska dilalka muddada-dheer ee laga helay warbaahinta ayaa hadda la xallilay iyadoo la adeegsanayo erayga caan ah DNA. Waa hagaag, waxaa lagu xallin karaa maxkamadaynta by Peter R. de Vries kadibna u wareegto wareegga warbaahinta maxkamad taasoo qaadaysa xukunka dadwaynaha, iyada oo aan haysan difaac dhab ah oo sharci ah. [...]
Sida warbaahintu u sharraxayso sheekadooda falanqaynta muhiimka ah iyo sii wadidda inay si sax ah u tirtirto sheekadooda (Jos Brech)
Filed in BADBAADADA HALKAN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 24 September 2018	• 3 Comments
Iyada oo la yaab leh waxaan eegay soo celinta Pauw, kaas oo qareenka Jos Brech, Gerald Roethof, uu si fiican u soo bandhigay sheekadiisa maqaalkii aan ku daabacay hal maalin ka hor warbaahinta. Waxay ahayd mid aad u kacsan in ay si lama filaan ah laba miisaan oo cusub oo miiska saaran. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen [...]
Hooska xiga ee Nicky Verstappen - Psyop Ped Qodobada sawir-qaadashada ilmaha!
Filed in BADBAADADA HALKAN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 20 September 2018	• 12 Comments
Haddii aad jeclaan OM leeyihiin sano in dadka tallaabooyin cusub diyaariso iyada oo PSYOP ah (hawlgallada nafsi ah), ka dibna dabcan aad hubiso in aad haysato tirada saxda ah ee jagooyinka xaq u leeyihiin in sheekada in baroortii ka sii dhigi caarada. Taasi macnaheedu waa in aad ku a waxyeelleeyey [...]
Waa maxay sababta Jos Brech oo aad u qarsoodi ah?
Filed in BADBAADADA HALKAN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 6 September 2018	• 2 Comments
Sheekada hareeraheeda Jos Brech, oo lagu eedeeyay dilka iyo xad-gudubka Nicky Verstappen, ayaa la afuufay si aad u sarreeya. Shalay ayaa waxaa loo duuliyay Holland iyadoo diyaarad gaar ah leh. Qiimaha qaarkood waa laga yaabaa! Diyaarad la qorsheeyay ma suurtagelin, sababtoo ah waxaan ka hadleynaa saylaha daroogada khatarta ah ee laga yaabo inuu xor ka ah saaxiibadiisa maafiyada wakhti kasta. [...]
DNA eray ereyga ah oo xakamaya kiis kasta oo dil iyo kufsi galmo!
Filed in BADBAADADA HALKAN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 30 August 2018	• 3 Comments
DNA waa habka cusub ee macquulka ah ee bilayska iyo caddaaladda oo qof walbana ammaan badan! Iyada oo DNA aad si dhab ah u xalin karto wax kasta. Tusaale ahaan, haddii deriskaaga la ogaado oo uu jiro DNA dharkeeda, markaas waxaanu og nahay qofka dilaaya! Taasi waa runtii waa guul muhiim ah [...]
Samaynta dilka Nicky Verstappen - Jos Brech PsyOp
Filed in BADBAADADA HALKAN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 29 August 2018	• 1 Comment
Netflix taxanaha 'Ka dhigista dilka' ayaa muujinaya sida dadku ay u xoqan karaan natiijada khaldan ee sanadaha ah. Halkii DNA ee taxanahan badanaaba ah cilladda madax furashada, DNA waxay sidoo kale noqon kartaa mabda 'cusub oo ka dhiga Kufsi inuu ku saleysanyahay. Hawlgallada maskaxda (PsyOp) waxaad xaqiijineysaa [...]
Bogga xiga »
Guud ahaan Wadarta: 1.342.888
Jarmalka wuxuu ka shaqeynayaa barnaamij coronavirus ah kaasoo isha ku haya qofka aad la xiriireyso
Xaraare Xareed op Coronavirus: halkee fayraska ka yimaadaa sidee bay u tarmaan uguna dhaqaaqaan?
Martin Vrijland op Coronavirus: halkee fayraska ka yimaadaa sidee bay u tarmaan uguna dhaqaaqaan?
Martin Vrijland op 'Fashilka cabal' waa wax aan micno lahayn oo waa kuma 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?